राजनीतिमा अपराधीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २७, २०७४ सम्पादकीय
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निम्ति उम्मेदवार चयनदेखि भविष्यमा तिनलाई परिचालन गर्नेसम्म अधिकारसम्पन्न संसदीय समितिमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित खुमबहादुर खड्कालाई राखेको छ ।
दाङ जिल्ला कार्यसमितिले उनलाई संघीय सांसदको उम्मेदवार बनाउन नामसमेत पठाएको छ । एमालेले पनि गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मनाङ २ को प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ । ऐनअनुसार दुवै व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुनै योग्य छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र पार्टीको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को (ङ) ले पनि उम्मेदवार हुने योग्यतामा त्यही प्रावधान राखेको छ ।
खड्का सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् । स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनअघि काठमाडौं प्रहरीले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने भन्दै केही गुन्डा नाइकेलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसमा मनाङे पनि थिए । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापको अभियोगमा उनी पटक–पटक पक्राउ परेका छन् । दुई ठूला दलले यस्ता पात्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, मतदाताको अपमानसमेत हो । ठूला दल दण्डहीनतामा कति अग्रसर छन् भन्ने यसले देखाउँछ । यस्तो क्रियाकलापले अपराधलाई राज्य–संरक्षित सुरक्षा प्रदान गर्छ । सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नै दलभित्र अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिनु लज्जास्पद हो । स्थानीय तहमा सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेको विपक्षी दल एमालेले मतदाताको विश्वासमा चोट पुग्ने गरी अपराध पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई काँधमा बोक्नु अशोभनीय हो ।
अघिल्ला चुनावसम्म कालो पृष्ठभूमि भएका वा नगददार दातालाई अप्रत्यक्ष ढंगले अवसर दिइन्थ्यो । समानुपातिकको ‘बन्द सूची’ मा राखेर तिनलाई घुमाउरो गरी संसद्मा पुर्‍याइन्थ्यो । अमर्यादित चरित्र भएका, समाजमा छवि बिगारेका वा पैसाको तागतमा जे पनि गर्ने लक्ष्य लिएकालाई नीति निर्माता बनाउन दलहरूमा थोरै भए पनि हिचकिचाहट देखिन्थ्यो । यसपालि त त्यस्तालाई हाकाहाकी स्वागत–सत्कार गरिएको छ । दलगत राजनीतिभित्र अपराधीकरणलाई हर्षोल्लासपूर्वक भित्र्याइएको छ । प्रमुख दलहरूमा जस्तासुकै पात्र अघि सारे पनि मत पाइन्छ भन्ने दम्भ बढेको छ । त्यही कारण ठूला अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष समारोहमा सिन्दूरजात्रा गरी प्रवेश दिलाइएको छ । हुँदाहुँदै तिनलाई सांसदको प्रतिस्पर्धामा छानिएको छ ।
सांसद बनाउनु भनेको कानुन बनाउने वा सरकारमा रही त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु हो । यति जिम्मेवारपूर्ण वा संवेदनशील ठाउँमा स्वार्थ समूहको प्रवेशले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई बिटुलो बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी (बाफिया), सहकारी एवं शिक्षाजस्ता ऐन घातक किसिमका बन्नुको मुख्य कारण निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु नै थियो । चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो माफियातन्त्र नियन्त्रण गर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १३ औंपटक आमरण अनशन बसिरहेका छन् । विधेयक नल्याउने वा ल्याए पनि ‘मेडिकल माफिया’ लाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याउन खोज्ने लुकामारीमा संसद्को पूरै कार्यकाल व्यतीत भएको छ । यसको कारण उही हो– संसद्मा अवाञ्छित तत्त्व हावी हुनु ।
त्यसैले गुट–उपगुट मिलाउने आन्तरिक व्यवस्थापनका नाममा वा आपराधिक मनसायले सानातिना समूह चलाएको कथित ‘आकर्षण’ देखेर दलहरूमा सम्मानित अवसर दिइनु हुँदैन । आपराधिक क्रियाकलापमा संंलग्न वा आर्थिक अनियमिततामा डामिएका व्यक्तिलाई नल्याउँदा पनि दलहरूमा जनशक्तिको खाँचो हुने होइन । बरु त्यस्तालाई स्वागत गरी अवसरसमेत दिँदा इमानदार एवं निष्ठावान कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ । सम्बन्धित दलको इज्जत र गरिमामा आँच आउँछ । त्यसको पनि ख्याल गरिनुपर्छ । मतदाताले ठूला दललाई निरन्तर ठूलै बनाएर गरिआएको विश्वास एवं भरोसाको घात पनि गरिनु हुन्न । नत्र सजाय उनीहरूले नै गर्नेछन् । भ्रष्ट र आपराधिक कर्ममा संलग्नहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिनु भनेको राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नु हो ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ ०८:११
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रसंग र प्रवृत्ति
आश्विन २७, २०७४ ध्रुव कुमार
प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा एसियाका १० दरिद्रतम मुलुकहरूमध्ये पहिलो अफगानिस्तान (६२७ अमेरिकी डलर), दोस्रो उत्तर कोरिया ६४२ डलर) र त्यसपछि नेपाल (७२५ डलर) सहित तेस्रो स्थानमा पर्छ ।
यी ३ मध्ये २ सार्क सदस्य राष्ट्र हुन् । यी दुईमध्ये अफगानिस्तान अझै हिंसात्मक आन्तरिक द्वन्द्वमा मुछिएको छ । त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थितिको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिआतंकवादी कारबाही टुंगिएको छैन । अमेरिकी फौजको भोगाइ साँच्चै नै कमजोरले बलियोलाई पेल्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको छ, अफगानिस्तान । जहाँ सोभियतकालमा आफैंले पुलपुल्याएर हुर्काएका तत्कालीन मुजाहिद्दिन र अहिलेको तालिवानसित भिड्नुपरेको तितो यथार्थले अमेरिकी रणनीतिक असफलतालाई नै प्रस्ट्याएको छ ।
उत्तर कोरिया भने सन् १९५३ को ‘आर्मस्टिक’ सम्झौतापछि पनि ‘युद्धरत’ नै छ । आफ्नो सत्ता टिकाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बद्र्धन गर्न अमेरिकी मूलभूमिमै प्रहार गर्ने क्षमता भएको अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रको सफलतापूर्वक परीक्षणसमेत गरेको छ । अमेरिकाले ध्वस्त गर्ने चेतावनी दिनु अनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कूटनीतिक वार्ताको कुनै तुक नरहेको प्रसंग दोहोर्‍याउनुले पनि उत्तर कोरियाले आफू ‘युद्धरत’ रहेको औचित्य पुष्टि गरेको छ । किनभने कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध समाप्तिको वैधानिक घोषणा भएकै छैन । कोरिया आफैं विभाजित छ ।
यी ३ दरिद्रतम मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान र उत्तर कोरियाजस्तो हामी आन्तरिक र बाह्य कारणले समेत प्रत्यक्षत: असुरक्षित छैनौं । विगतको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’पछि नेपाल आतंककारी तथा हिंसात्मक गतिविधिको घातक प्रभावबाट टाढै रहेको छ । हुन त नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मान्छेको थुप्रै संख्या तथा बढ्दो बेरोजगारीकै कारण पनि विभिन्न आपराधिक, आतंकवादी, अनि हिंसात्मक विद्रोहको सम्भावना भने अझै नरहेको होइन । त्यस्तै आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विभेदले मात्र नभई जातीय, धार्मिक विभिन्नताले समेत विवाद र हिंसा निम्त्याउन सक्छ । यस सन्दर्भमा हामी साह्रै भाग्यमानी छौं । तर निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, चरम संस्थागत भ्रष्टाचार, विधिविधानको उपेक्षा, प्राकृतिक प्रकोपको साथै भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय जनजीवन साधारणतया अस्तव्यस्त रहेको छ । प्रत्यक्षत: मुलुक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने एउटा संक्रमणकाल पूरा गरी संघीय राज्य व्यवस्थापनको संक्रमणचक्रमा प्रवेश गर्ने हँुदा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सचेतताको साथै चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कसरी परिभाषित गर्ने प्रसंग पनि आउन सक्छ । साधारणतया सुरक्षाको अवधारणालाई सजिलै बुझ्न सक्ने उपाय हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य कुन अवस्थामा छ र उक्त सामथ्र्यलाई हाम्रो आर्थिक क्षमताले कतिसम्म टेवा दिन सक्छ । त्यही मापदण्डको आधारमा हामी कति हदसम्म असुरक्षित वा सुरक्षित छौं भनी अनुमान गर्न सक्छौं । राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी राजनीति, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समन्वय, आशावादी अर्थतन्त्रको साथै कानुनी राज्य पद्धतिले आन्तरिक सुरक्षास्थिति सुदृढ गर्न निकै सघाउँछ । हुन त आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको प्रावधानहरूलाई पृथक तवरबाट परिभाषित गर्न अचेल सम्भव छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत परिभाषाभित्र यी दुवै पक्षको गहन जिम्मेवारी बढेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी अक्सर सुरक्षा संयन्त्रकै बारेमा बढी सोच्ने गर्छाैं र त्यही अनुसार निष्कर्षमा पुग्छौं । सुरक्षा संगठनको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठाउँछौं । तर राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्काे आयामबारे हामी रत्तिभर चिन्तित छैनौं । वास्तविकता त के भने परनिर्भरता हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति अति ठूलो र भयावह जोखिम हो । उदाहरणको लागि नाकाबन्दी हामी विरुद्ध युद्धको स्थिति थियो, जुन बन्दुकले लडिंँदैन । तर नाकाबन्दीको पीडा र क्षति हामी पराश्रित हुनुकै कारण भनी किन बुझ पचाउँछौं ? हाम्रो जनजीवनलाई त्यसबेला अलिकति भए पनि तस्करहरूले आडभरोसा दिएको मन्त्रीले नै वक्तव्य जारी गरेको हामीले सुन्यौं । हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र भने त्यसबेला मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेप्दै थियो । हामी विकल्पविना छट्पटिएका थियौं । यसैले अब परनिर्भरतालाई हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय ठम्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो विप्रेषणले धानेको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले अन्तरनिर्भरताको लक्ष्यलाई नारामा मात्र सीमित गर्दा मुलुकको स्थिति खुम्चिएको छ ।
हामी जुन भूराजनीतिक स्थितिमा छौं, सैन्यशक्ति हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भको एकमात्र मापदण्ड हुन सक्दैन । मधेसवादी राजनीतिक नेताहरूले संघीयताको मागसितै उठाएको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारासमेत हाम्रालागि राष्ट्रिय सुरक्षा त्रासदी भएको थियो । सुरक्षा सुदृढीकरण तथा सैनिक क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति यथोचित आर्थिक टेवा चाहिन्छ । हाम्रो आर्थिक क्षमता स्थितिको आँकलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा साधारणतया हाम्रो कृषि उत्पादन, उद्योगधन्दा, वाणिज्य व्यापार, खनिज पदार्थको सञ्चिती तथा ऊर्जा क्षमता र उपयोग कुन अवस्थामा छ, त्यो कुनै न कुनै तवरले सैन्यशक्ति साथै सुरक्षा संयन्त्रमा प्रतिविम्बित हुन्छ । यी राष्ट्रिय सूचकहरूको तथ्यगत विवेचनाबाट हामी राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थाबारे पूर्णतया जानकार हुन सक्छौं । राष्ट्रिय सुरक्षा वा असुरक्षामा चुलिँदो व्यापार घाटा र बढ्दो परनिर्भरताले कस्तो असर पर्छ भनी सुरक्षा निकायले सोच्ने कुरा त होइन । तर परनिर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धनको अवधारणामा अटाउने विषय हो वा होइन । अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सोच्ने बेला आएको छ ।
जब राष्ट्रिय राजनीति ‘आफ्नो मान्छे’को परिधिभित्रै रुमल्लिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा अवयव कमजोर हुन्छ । फेरि सरकारले ‘गाइडेड’ प्रतिवेदनको आधारमा तजबिजी निर्णय लिने कारणले पनि सुरक्षा निकायहरूसमेत अन्योलग्रस्त हुने गरेका छन् । संरचनात्मक सुदृढता तथा अनुशासनरहित सुरक्षा अंगहरू व्यवस्थापकीय चलखेलको पनि सिकार हुने गर्छन् । हामीले अक्सर राष्ट्रिय सुरक्षाको हकमा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले अविछिन्न अभिभारा बोक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्छाैं । खासगरी बाह्य सुरक्षा चुनौतीसित रक्षा मन्त्रालयले सरोकार राख्छ भने गृह मन्त्रालयले मुलुकको समस्त सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्यभार बहन गरेको हुन्छ । मुलुकको निजामती प्रशासनदेखि प्रहरी तथा खुफिया निकायहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुने गर्छ । आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्दै कानुनी राज्य सञ्चालित गर्नु नै यसको एकमात्र उद्देश्य हुन्छ । तर सरकार फेरिनुसितै नीति–नियम पनि फेरिने हँुदा हामीकहाँ कुनै पनि निर्णयको स्थायित्वमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै: गृह र रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनासाथ सुरक्षा संरचना र राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न प्रतिवेदन लेखाउने चलन बढेको छ । अहिले रक्षा मन्त्रालयमा नवगठित कार्यदलको संयोजकत्व पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेबाट देवेन्द्र सिटौला हँुदै माधवप्रसाद रेग्मीमा सरेको छ । संघीय संसदको निर्वाचनपछि गठन गरिने केन्द्रीय सरकारको रक्षामन्त्रीले पनि आफ्नै कार्यदल गठन गर्ने परम्परा थेग्नेछन् ।
स्मरणीय छ, जंगी अड्डाले २०६९ सालमा सेनाको संगठनात्मक आन्तरिक पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘मिलिटरी डक्ट्रिन’समेत परिभाषित गरेको थियो । त्यसैगरी महारथी गौरवशमशेर राणा सेनाध्यक्ष पदमा बहाली हुँदा सेनाको भूमिकाबारे ‘भिजन डक्युमेन्ट’ पनि सार्वजनिक गरेका थिए । ती दस्तावेजहरू निश्चय पनि राजनीतिक दलहरूले प्रचार गर्ने चुनावी घोषणापत्र जस्तै त होइन होला । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको गहिरो र गहन बहस अघि बढाउनकै लागि सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूले विद्यमान परिस्थितिबारे गम्भीरतासाथ पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ । पृतनाको संख्या थप्दैमा सेनाको क्षमता, सामथ्र्य र शक्ति बढ्ने होइन । सात संघीय प्रदेशमा ७ पृतनापति (उपरथी) सितै सहायक रथीको संख्या बढ्ने निश्चित छ । त्यस्तै २ जना रथी दरबन्दीमै सेना सीमित नहुन पनि सक्छ । उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको बढ्दो दबाब यदि हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य र सामथ्र्य अनुसार हाम्रो निर्णयबारे अघि नै सोच्न सकेनौं भने हाम्रो रणनीति नाकाम पनि हुनसक्छ ।
गृह मन्त्रालयमा पनि नीति–नियम फेरिने परम्परा जारी छ । कहिले गृहमन्त्रीको स्वार्थको कारण जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद हुने, कहिले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमै हानाथाप त कहिले सातै प्रदेशमा एआईजी पद स्थापना गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयमा मतभेद । गृहमन्त्रीबाट ११ जना एआईजीको दरबन्दीपछि भएको यो निर्णय २०७३ मा प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत छ । उक्त प्रतिवेदनले संघीय संरचनाभित्र एआईजीको होइन, प्रदेशहरूमा आईजीपी पदस्थापना सिफारिस गरेको छ । अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी निकायले केन्द्रप्रति जवाफदेहिता व्यहोर्नुपर्ने जस्तै संघीय प्रदेशहरू केन्द्रशासित हँुदैनन् । त्यस्तै सबै संघीय प्रदेशहरूमा केन्द्रमा जस्तै एउटै राजनीतिक दलको वा एकैखाले गठबन्धन सरकार गठन हुने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । तसर्थ केन्द्र र राज्यबीच सम्बन्धको परिवेश समन्वयकारी भूमिकाबाट निर्देशित हुनु पर्नेछ, केन्द्रीकृत नियन्त्रणबाट होइन । आन्तरिक सुरक्षाकै सन्दर्भमा खुफिया संयन्त्रसितको समन्वयन र प्रभावकारी भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । गोप्य सूचना प्रवाहमा ढिलासुस्ती र प्राप्त सूचनाको तथ्यगत विश्लेषणमा अपेक्षा राष्ट्रिय हितमा हुने छैन ।
भन्नैपर्ने अर्काे कुरा हाम्रा नेताहरूमा सुरक्षा मामलामा कुनै सजगता छैन । उनीहरूलाई त राष्ट्रिय सुरक्षा होइन, सत्ता सुरक्षाको चिन्ताले बढी पिरोल्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर छलफलको विषय हुनु अब नेताहरूको मनस्थिति फेरिनुपर्छ । त्यसैले जंगी अड्डाको रक्षा मन्त्रालयप्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुनसकेको छैन । किनकि रक्षा मन्त्रालय कर्मचारीतन्त्रको पकडमा छ । त्यहाँ सेना र सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएका निजामती कर्मचारीहरूको नितान्त अभाव छ । फेरि कर्मचारीहरूको निम्ति रक्षाभन्दा गृह मन्त्रालयको आकर्षण बढी छ । त्यसैले त्यहाँ कर्मचारीहरू वृत्तिविकास गर्न चाहँदैनन् । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मुलुकको विदेश नीतिको साथै प्रतिरक्षा अवधारणाको संवाहक हुने अग्रणी भूमिकाबाट चुकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सम्बन्धित निकायहरूले समेत महत्ता दिन छाडेजस्तो प्रतित हुन्छ । हाम्रा सुरक्षा निकायहरूमा पर्याप्त बजेटको अभावमा पराश्रित हुँदै जानुले हाम्रो सुरक्षा नीति प्रभावित नभई रहन सक्दैन । हाम्रा छिमेकीहरूले नेपाली भूमिबाट असुरक्षित भएको अनुमान र शंकाकै आधारमा हाम्रो सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी र खुफिया निकायहरू समेतलाई स्रोत र साधनले सघाउनुले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ती निकायहरूको ‘लोयल्टी’मा पर्न सक्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धको सुमधुरताको निम्ति गरिने यस्ता समझदारीपछि गएर महँगो हुन सक्नेप्रति बेलामै सचेत हुनु राम्रो ।
सबैले बिर्सने गरेको कुरा के भने हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ । त्यसले पोहोर साल १६ औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । यस वर्ष नेपालको संविधान जारी भएको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनायौं । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ राष्ट्रपतिद्वारा नै सार्वजनिक भएको छ । यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिकै सजगता र सचेतताको उपज हुन् । तर हामीले सुरक्षाको प्रमुख चुनौती (थ्रेट) को पहिचान गर्न भने बिर्सेका छौं । जसको मूल्यांकन र विश्लेषणद्वारा मात्र सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई चुनौतीको रूपमा लिएका छौं । त्यो पनि हाम्रो छिमेकी भारतले एकतर्फी रूपमा परिभाषित गरेर सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) को लस्कर तैनाथ गरेपछि हामी सतर्क भएको संकेतमात्र हो । ईपीजीको ५ औं बैठक (असोज २१–२२, २०७४) मा भारतले नै सीमा नियमनको विषय उठाएको छ । यसले ‘रोटीबेटी’को सान्निध्य सम्बन्धभन्दा खुला सीमाको बढ्दो जोखिमबारे भारत गम्भीर भएको बुझ्न सकिन्छ । हुन त सीमामा विद्युतीय तारबार वा पर्खाल नै ठड्याए पनि छिद्रहरूको उपयोग गर्दै अपराधी, आतंकवादी र तस्करहरू वारपार गरिनै हाल्छन्, काश्मीरमा जस्तै । तैपनि सीमा नियमनको उपादेयतालाई भने उपेक्षा गर्न सकिँंदैन ।
अचेल हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको शब्दार्थ बन्दुकसित सम्बन्धित गरिनुले सुरक्षा अवधारणालाई सीमितता प्रदान गरिएको छ । हामीले बन्दुक बोकेको सेना वा सुरक्षा निकायको सार्थकतामात्र सम्झेका छौं । बन्दुकले सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने धारणाले नै प्रतिआतंकवादी कारबाही गर्दा सरकारले गाउँघरमा ‘मिलिसिया’ तथा ‘भिजिलान्ते’ समूह गठन गरी जसरी बन्दुक बाँड्ने काम गर्‍यो, त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याओस् । राष्ट्रिय संकटको बेला बन्दुकको अनुशासनबाट अपरिचित गैरतालिमे जनताको हातमा हतियार सुम्पिनु कति जायज थियो, त्यसबारे सोच्नसमेत नसक्नु असुरक्षाकै अर्काे आयाम हो भनी यहाँ भन्नु अत्युक्ति नहोला । राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धनको प्रसंगमा हाम्रो आवश्यकता सेना वा सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग (युज अफ फोर्स) नभई त्यसको उपयोगिता (युटिलिटी अफ फोर्स) हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । यही आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्न युक्तिसंगत हुन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति जनजीवनमा पर्न सक्नुपर्छ ।
औचित्यहीन ‘स्वैच्छिक अवकाश’
ओलीलाई मौका र बढ्दो जोखिम
किनारामा महिला नेतृत्व
सेनालाई पेन्सनमा विभेद किन ?
डा. अरूणा उप्रेती
प्रांगारिक मुलुक बनाउने दूरदृष्टि
डा कृष्णप्रसाद पौडेल
वैधानिक आमाबुवाका गैरनागरिक छोरीको पीडा
स्मीता अधिकारी चैत्र ६, २०७४
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा–२९ की बिनिता गुरुङमाथि केहि दिनअघि एउटा अप्रत्यासित घटना भयो । त्यो घटना महिला हिंसा सम्बन्धि थियो । सँगै मर्ने सँगै जीउने...
भाषा पहिचान र विकासमा बंगलादेशी अनुभव
प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव चैत्र ६, २०७४
मानिसका लागि भाषा एउटा विशिष्ट उपलब्धि हो । यसको संरचना अत्यन्तै गहन र पेचिलो हुन्छ । यस्तो संरचनाको माध्यमबाट मानिसले आफ्नो मनमा सोचेको विचार मौखिक वा लेख्य...
संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक लक्षण
डा. कमल लामिछाने चैत्र ६, २०७४
माओवादीको १० वर्षे विद्रोहपछिको अर्को १० वर्षलाई सरसर्ती नियाल्दा त्यहाँ मूलत: बहस दुई धु्रवमा केन्द्रित देखिन्थ्यो ।
मध्यमार्गी राजनीतिको मियो
विनोद सिजापती चैत्र ६, २०७४
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा सफलतासाथ सम्पन्न तीनै तहको चुनावमा बेहोरेको ‘लज्जास्पद हार’को विषयमा चर्चा/परिचर्चा जारी छ ।
देउकलियाका व्याधा र सिंहदरबारका प्यादा
कृष्ण पहाडी चैत्र ६, २०७४
८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, विश्वभरि नै कतै धुमधामसाथ कतै औपचारिकतावश मनाइँदै थियो । त्यही दिन नेपालको कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकास्थित देउकलियाका व्याधाहरूले भने फरक...
सम्पादकीय चैत्र ६, २०७४
प्रस्ट छ– संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक औजार भनेकै कर्मचारी हुन् । र, यतिखेर संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न ठूलो संख्यामा तत्काल कर्मचारी आवश्यक छ ।
रमेशनाथ पाण्डे चैत्र ५, २०७४
दूरदर्शी नेताले देशको लागि संवेग सिर्जना गर्छ, योग्य नेतृत्वले त्यसलाई सदुपयोग गर्छ, अनि देशले प्रगतिको छलाङ लगाउँछ ।
संगीता खड्का चैत्र ५, २०७४
हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानताको नारा उल्लेख गरेका छन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने महिलाको उपस्थिति नीति निर्माण गर्ने निकायमा भने त्यही...
केशरबहादुर भण्डारी चैत्र ५, २०७४
निजामती कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र खटाएको निकायमा नगए सिधै बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको सराहनीय र साहसिलो कदम हो ।
डा. अरूणा उप्रेती चैत्र ५, २०७४
केही महिनाअघि एक दिदीले मसँग भनिन्, ‘मेरो टोलमा एक मन्दिर बनाउन थालेकी छु, केही पैसा दान देऊ न ।’